Qardho - Wikipedia
Degmo in Puntland, SoomaaliyaTemplate:SHORTDESC:Degmo in Puntland, Soomaaliya
Halka Qardho ay kaga taalo Soomaaliya
Cabdifitaax Siciid Dheere
Qardho waa magaalo ku taal Bariga soomaaliya gaar ahaan maamul goboleedka puntland gaar ahaan gobolka KARKAAR waana magaalo taariikhiya oo jirtay muddo dheer Qardho waxay caan ku tahay magaalada Boqortooyada soomaaliya waana magaalada dhaqanka iyo hiddaha somaaliya Qardho wa magaalo wax so saar Badan u leh umadda soomaaliya waxa ayna ka kooban tahay ila iyo lix xaafadood o waa weyn
qardho waa magalo udub dhexaad u ah magaloyinka puntland oo waxay ku dhex taala bartmaha puntland .magalada qardho waxa ku yaala meelo istiratiji ah waxana kamida
xabsiga wayn ee puntland
jamacad bariga afrika
Garoonka Kubadda Cagta .
Aqoon[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Qardho ayaa tiro ka mid ah hay'adaha tacliinta. Sida laga soo xigtay Wasaaradda Waxbarashada ee Puntland, waxaa jira 39 dugsi hoosyimada degmada Qardho. Waxa Ka mid ah Al-Xanaan, Shire, Gahayr iyo Gudcad. Dugsiyada Sare ee degaanka waxaa ka mid ah Sheikh Osman, Muntada, Nawawi iyo Al-Ashar Al-Azhar University, awood ugu sareeya Masar ee arrimaha Islaamka, sidoo kale ku shaqeeya magalada Qardho. Jamacada waxa ka mid ah, East Somalia University (ESU) waxay bixisaa tacliin sare. East Africa University (EAU)
On November 25, 2012, Dowladda Puntland oo furtey xabsiga ugu weyn puntland oo laga hirgiliyey magalada Qardho. Intaa waxaa dheer, magaalada waxaa looga adeegaa Isbitaalka Guud ee Qardho. Xarunta daryeelka caafimaadka ee gaarka loo leeyahay Microbiology Service Laboratory.
Bishii Abriil 2013, Wasaaradda Puntland ee Kalluumaysiga iyo Khayraadka Badda ku dhawaaqday qorshayaal ay suuqa kaluunka cusub la furo sannadka gudahood. Mashruucan wuxuu qayb ka yahay qorshe weyn oo gobolka lugu horumarinayo sidoo kale waxa nah laga hirgiliyey suuq la mid ah kan ka furan magaalada Galkacyo, iyo kan Garowe .
Bishii June 2014, dowlada Puntland ka bilowday olole geed-abuuris cusub ee gobolka, iyada oo Wasaaradda gobolka ee Deegaanka, Duurjoogta iyo Dalxiiska qoresheyneyno in aan ku beeri 25,000 oo geedo dhamaadka sanadka, sidoo kale Garowe, Bosaso, Waaciye, Ufayn, Dhahar, Buuhoodle, Baran iyo Gaalkacyo. Ololaha ayaa qayb ka ah iskaashi ballaaran oo u dhexeeya maamulka Puntland iyo Midowga Yurub u qaadanay tallaabooyin ilaalinta deegaanka kala duwan ee gobolka, iyadoo ujeedadu tahay in kor u qaadida dhiraynta
Bishii May 2015, Dawlada Puntland ayaa ku dhawaaqay in la qorsheeyay in ay bilaabayaan mashaariic cusub oo horumarineed ee Qardho.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Qardho&oldid=216818"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 14 Sebteembar 2021, marka ee eheed 21:44.